Ndị na -emepụta ihe na ndị na -eweta ya China Micro Blood Collection Tube Production Line IVEN
1. Ogo dị elu nke akpaaka - arụ ọrụ mgbakọ akpaka n'ụzọ zuru oke, njikarịcha ezi uche yana ijikọ usoro ọrụ, ịpịpụta akpaka na mmepụta ngwaahịa emechara. Usoro mmepụta niile chọrọ naanị ndị ọrụ aka ọrụ 1-2 ka ha wee nweta ihe nrụpụta;
2. Arụ ọrụ dị elu, ngagharị na ọnụego alụmdi na nwunye ngwa - ụdịdị modular, usoro kọmpat, enwere ike ịgbakọta ya na -akpaghị aka dịka mkpa ndị ahịa si emepụta ya.
3. Ọkwa dị elu nke mkparịta ụka igwe mmadụ-imebe ọdụ mmadụ, imepụta mmemme mmemme igwe mmadụ, gosipụta mkpu ọtụtụ ọrụ yana nchọpụta nsogbu inyeaka;
4. Njikwa usoro, njikwa mma - nchọpụta ụkọ ihe, nchọpụta ihe dosing, nchọpụta okpomọkụ ihicha, nchọpụta okpu, nchọpụta okpu efu na nchọpụta ndị ọzọ, wdg.
5. Usoro dosing kapịrị ọnụ na dosing, yana dosing ngwaahịa kwekọrọ na ya n'ụzọ ezubere iche. A na -eji atomizing na dosing arụ ọrụ ultrasonic akpaka nhicha ọrụ.
6. Ultrasonic akpaka nhicha nhicha, ma jiri ọrụ ihicha ya mee ya, ị nwere ike tọọ ugboro nhicha dịka usoro chọrọ, ọ dịghị mkpa iji aka hichaa oghere ahụ. (Atomizing na dosing ọdụ)
7. SUS304 mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, etiti na mpempe akwụkwọ na -anabata nhazi nano, okpokolo agba nke ígwè, ịdị elu dị elu na nnabata ujo welded steel frame frame.
Pneumatic AIRTAC cylinder, valve solenoid, shangshun cylinder na ihe ndị ọzọ pneumatic na -eji hụ na arụ ọrụ kwụsiri ike na ogologo ndụ.
Ngwa eletriki Ngwa eletriki mbụ Schneider (France), Omron (Japan) na Leuze (Germany) nnwale nnwale, Mitsubishi (Japan) PLC, Siemens (Germany) igwe igwe mmadụ, Panasonic (Japan) servo moto.
Ngwa ọgwụ American FMI seramiiki metering pump, mgbapụta nkenke seramiiki injection. (atụmatụ a nwere naanị otu ọdụ dosing).
Isi components Ihe eji eme ya bụ igwe anaghị agba nchara, etiti na ọnụ ụzọ na-ahazi nano, okpokolo agba nchara, alloy aluminom dị elu, kwụsiri ike na ntụkwasị obi ma dịkwa mfe nhicha, kwekọrọ n'ihe GMP chọrọ.
Nkọwapụta ọkpọkọ dabara adaba Ewepụghị ala micro tube. (dabere na nlele enyere, usoro anọ)
Ike imeputa ihe Pieces 5500 iberibe / elekere
Dosing usoro na nkenke 2 nozzles FMI ceramic quantitative pump (atomization ikuku) ±% 6% (ntọala mgbako 10µL)
Usoro ihicha Otu 1, "PTC" kpo oku, ihicha ikuku ọkụ
Ịnye ọkụ 380V / 50HZ
Ike Usoro mgbakọ ~ 6 KW
Igwe ikuku ikuku dị ọcha 0.6-0.8Mpa
Ikuku ikuku <300L / min, ntinye ikuku G1 / 2, ọkpọ ikuku Ø12
Akụkụ akụrụngwa: ogologo, obosara na ịdị elu 3000 (+ 1000) * 1200 (+ 1000) * 2000 (+ 300 ọkụ mkpu) mm
Nke gara aga: Igwe mgbakọ kateeti IV
Osote: Ntanetị na -ejuputa katọn
Ngwakọta Ọbara Ọbara Ụmụaka
Micro nzukọ collection tube nzukọ akara
Ngwakọta Ngwakọta Ọbara Micro Micro
Obere igwe mkpokọta tube igwe
Nchịkọta Ọbara Ọbara Ọbara Ọgbakọ
Nchịkọta Ọbara Ọbara Pediatric Tube Production Line
Ịghasa Cap Mini Blood Collection tube Assembly Line
Ịghasa Cap Pediatric Blood Collection tube Production Line
Igwe eji emejuola agịga, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Led,